भारतमा मतगणनाको ताजा अवडेट : मोदीलाई एक्लै बहुमत, कुन पार्टीको कति सिट ? — Motivatenews.Com
भारतमा मतगणनाको ताजा अवडेट : मोदीलाई एक्लै बहुमत, कुन पार्टीको कति सिट ?
काठमाडौं – अहिले भारतमा सम्पन्न लोक–सभा निर्वाचनको मतगणना जारी छ । साँझसम्म सबै परिणाम आइसक्ने सम्भावना छ ।
सुरुवाती मतगणनाका आधारमा वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टीले सहजै बहुमत हासिल गर्ने देखिएको छ । त्यस्तै भाजपा नेतृत्वको ‘एनडीए’ गठबन्धनले सहजै ३४४ भन्दा बढी सिट ल्याउने देखिएको छ ।
ती मध्य ३८ सांसद भाजपा र जनता दल९युनाइटेड०को गठबन्धनबाट छानिने सम्भावना देखिएको छ । लालु प्रसाद यादवको राष्ट्रिय जनता दल र कांगे्रसको गठबन्धनले जम्मा २ सिट जित्ने अवस्थामा छ ।
२०७६ जेठ ९ गते प्रकाशित